Musharrax Cali Xaaji Warsame oo Gaalkacyo si aan kalahar laheyn loogu soodhaweeyay (sawirro) – Radio Daljir
Musharrax Cali Xaaji Warsame oo Gaalkacyo si aan kalahar laheyn loogu soodhaweeyay (sawirro)
Oktoobar 27, 2018 6:50 g 0
Magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaa maanta lagu soo dhaweeyey Musharax Cali Xaaji Warsame oo kamid ah Musharaxiinta Puntland. Musharraxa waxaa Garoonka diyaaradaha ee magaalada Gaalkacyo ku soodhaweeyey dadweyne farabadan oo sitay calanka Puntland iyo kan Soomaaliya, iyo waliba maamulka gobolka iyo kan degmada.
Qabanqaabada soodhaweynta Musharrax Cali Xaaji Warsame oo maalmahanba ka socotay magaalada Gaalkacyo ayaa ahayd mid aan kalahar laheyn.
Amaanka magaalada ayaa aad loo adkeeyay, waxaana waddooyinka iyo garoonka diyaaradaha ku sugnaa ciidamada Booliska iyo duwa daraawiishta Puntland.
Hoos ka daawo sawirada soodhaweynta musharraxa.
Ololaha Doorashooyinka Puntland - Cali Xaaji 2019 41 Wararka 16953
Warbixinta soodhaweynta musharrax Madaxweyne Puntland Cali Xaaji Warsame (dhegayso)